Qaraxyo Shisheeyaha Lagula Beegsaday Konfurta Iyo Bartamaha Dalka Somalia. – Bogga Calamada.com
Qaraxyo Shisheeyaha Lagula Beegsaday Konfurta Iyo Bartamaha Dalka Somalia.
Wararka ka imaanaya gobalka Shabeelada hoose waxey sheegayaan in qeybo ka mid ah gobalkaasi qarax culus lagula beegsaday kolanyo ka tirsan ciidamada Kufaarta Uganda ee qeybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka Somalia.
Qaraxan ayaa ka dhacay wadada laamiga ah ee xiriirisa degmooyinka Baraawe iyo Buula Mareer oo ka wada tirsan gobalka Shabeelada hoose,iyadoona qaraxan loo adeegsaday Miinada dhulka lagu aaso ee meelaha fog laga hago.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in qaraxu uu haleelay Gaari Taaw ah kaasi oo gabi ahaan ku burburay weerarka, dadka deegaanka ayaa sheegay in sheedda sare ay ka arkayeen qiic iyo uura Madoow oo cirka isku shareeray.
Dhinaca kale wararka ka imaanaya Wilaayada Hiiraan ayaa sheegaya in qarax xooggan laga maqlay garoonka diyaaradaha degmada Buula Burde, qaraxa ayaa la sheegay in lala helay isku imaatin ay ku sugnaayeen ciidamada dowlada Ridada Jabuuti ee duulaanka ku jooga degmooyin ka tirsan gobalka Hiiraan.
Wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo Buulo Burte waxey sheegayaan in qaraxan khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed lagu gaarsiiyay askarta Murtadiinta Jabuuti.